मोरोसिनीदेखि एरिक्सनसम्मः मैदानमै ‘कोल्याप्स’ भएका पाँच फुटबलर
काठमाडौं । विश्व फुटबलमा कहिले कहीँ दुर्भाग्यवस खेलाडीहरू मैदानमा ढल्न गरेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण युरो २०२० अन्तर्गत शनिबार राति भएको डेनमार्क र फिनल्यान्डबीचको खेलमा क्रिस्टियन एरिक्सन हुन् ।
फिजिकल फिटनेस एकदमै आवश्यक पर्ने खेल हो, फुटबल । फुटबलरले यसलाई सधैँ ध्यान दिएकै हुन्छन् । तर पनि कहिले कहीँ बिर्सनलायक दुर्घटनाबाट बच्न सम्भव हुँदैन । फुटबलको इतिहासमा धेरै पटक फुटबल खेलाडी मैदानमै ढलेका छन् । यस्तै विश्व फुटबलका पाँच दुर्घटनालाई यसरी सूचीकृत गर्न सकिन्छ ।
५. पियरमारियो मोरोसिनी
पियरमारियो मोरोसिनी इटालियन सिरी ‘बी’मा लिभोर्नोका लागि खेल्दै गर्दा पेस्काराविरुद्धको खेलका दौरान मैदानमा ढलेका थिए । पटक पटक उठ्ने कोसिस गर्दा पनि असफल भएका २५ वर्षीया मोरोसिनी खेलको ३१औं मिनेटमा ढलेका थिए । मेडिकल स्टाफले तुरुन्तै उनको उपचारका लागि मैदानमा पुगेका थिए र उनलाई अस्पताल पु¥याएको थियो । तर, उनको जीवन बचाउन मेडिकल स्टाफहरू असफल भएका थिए । उनलाई कार्डिक एरेस्ट भएको र अस्पताल पु¥याउँदा उनको मुटुको चाल बन्द भइसकेको चिकित्सकले बताएका थिए ।
४. फ्याब्रिक मुआम्बा
पियरमारियो मोरोसिनीको दुर्घटनाको एक महिना अगाडि २०१२ मार्चमा फ्याब्रिक मुआम्बा पनि त्यस्तै दुर्घटनाको शिकार भएका थिए । बोल्टन वान्डर्सका खेलाडी फ्याब्रिक एफए कपमा टोटेनह्यामविरुद्धको खेलको पहिलो हाफको अन्तिममा ढलेका थिए । २३ वर्षीया फ्याब्रिक तुरुन्तै अस्पला पु¥याइएको थियो र उनको मुटुको चाल ७८ मिनेटसम्म रोकिएको चिकित्सकले बताएका थिए । तर, उनको जीवन बचाउन चिक्सक सफल भएका थिए र दुई दिनपछि होस खुलेको थियो ।
३. च्येक टियोटे
टियोटे पनि विश्व फुटबलका एक दुर्भाग्यशाली खेलाडी साबित भए, जब उनले कार्डिक एरेस्टलाई पराजित गर्न सकेनन् । २०१७ को जुनमा चाइनिज सुपर लिगमा बेइजिङ इन्टरप्राइजेजका लागि खेलिरहेका टियोटे ३१ वर्ष पुग्न केही दिन अगाडि मैदानमा ढलेका थिए । उपचारका लागि तुरुन्तै अस्पला पु¥याएका टियोटेको केही बेरपछि मृत्यु भएको थियो । न्युक्यासल युनाइटेडका पूर्व खेलाडी टियोटेले इङ्लिस क्लबका लागि १ मात्र गोल गरेका थिए । जुन गोल आर्सनलविरुद्धको ४–४ बराबरीमा क्रममा भएको थियो ।
२. अब्देलहक नोरी
आयाक्सका खेलाडी नोरी वेर्डर ब्रिम्यानविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका क्रममा मैदानमा ढलेका थिए । विश्व फुटबलमा उदाउँदा खेलाडीको रूपमा हेरिएका नोरी पनि कार्डिक एरेस्ट शिकार भएका थिए । तत्कालै उनलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरेर अस्पलाल पु¥याइएको थियो । जहाँ उनी २ वर्ष र ९ महिनासम्म कोमामा रहे । उनले दीर्षकालिन मस्तिष्क घातको शिकार हुनुप¥यो । २०२० मार्चमा उनी होसमा फर्किए र ह्विलचियरमा बस्न सक्ने भएका छन् । उनी अहिले परिवारसँगै छन् ।
१. क्रिस्टियन एरिक्सन
डेनिस प्लेमेकर एरिक्सन युरो २०२० को समूह बी अन्तर्गत फिनल्यान्डविरुद्धको खेलको ४२औं मिनेटमा ढलेका थिए । रिपोर्टका अनुसार उनलाई पनि हृदयघात भएको हो । मैदानमा ढल्ने बित्तिकै आफ्नो टोलीका खेलाडीले घेरिएका उनलाई मेडिकल टोलीले सीपीआर दिइएको थियो ।
चिकित्सकले केहीबेरमै एरिकसनलाई होसमा ल्याउन सफल भएका थिए । र, उनलाई तत्कालै नजिकको अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । अहिले पनि उनको उपचार जारी छ र स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको डेनमार्क फुटबल संघले बताएको छ ।